Qalab muusig - Gpedia, Your Encyclopedia
kabanku waa mid ka tirsan qalabka muusig
Qalabka Muusiga (Af Ingiriis : Musical instrument; Af carabi: آلة موسيقية) waa dhamaan agabka loo isticmaalo in dhawaqa muusig lagu sameeyo si loogu qurxiyo iyo macaaneeyo hees, gabay iyo ereyo loogu talogalay in dad lagu madadaaliyo.
Dunida maanta aad ayay casri u noqotey waxaana la isticmaalaa noocyo badan oo qalabka muusiga ah, kuwaasi Waxaa ugu caansan kabanka, gitaarka, durbaanka, biyaano iyo turunbo. Dhinaca kale taariikhda qalabka muusigu waa mid aad u qoto dheer waxaana la aaminsan yahay in dadku isticmaali jireen qalabyo kala duwan tan iyo 6,500 sano ka hor.
Qalabka muusiga sida kabanka Waxaa la isticmaali jiray wakhti imika laga joogo 6,500 sano.
Guud ahaan Waxaa jira noocyo badan oo qalab muusig ah, kuwaasi Waxaa ugu caansan wakhti badan la soo isticmaali jirey kuwan:
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Qalab_muusig&oldid=163225"